Myanmar Gospel Songs - Hymns, Contemporary, Praise and Worship
Lyrics / Podcast / Worship
Verse: ဘုန်းတန်ခိုးနဲ့ဆင်းကြွနေ ဤအရပ်၌ နက်ရှိုင်းသော မျက်မှောက်တော် ကြိုလင့်နေ ၀ိညာဉ်တော်တန်ခိုး အရှိန်ပြင်းစွာ သွန်းလောင်းနေပြီ… မဖြစ်ဖူးသော နိမိတ်လက္ခဏာ မြင်တွေ့ရ ထူးဆန်းသော အဖြစ်ပျက်တွေ ကြုံတွေ့နေ ၀ိညာဉ်တော်မိုးရေ ဤအရပ်၌ သွန်းဖြိုးနေပြီ… Cho: ရူပါရုံအသစ်တွေ မြင်တွေ့သောနေရာ ဘိသိက်ခြင်းတန်ခိုးတွေ စီးဆင်းသောနေရာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုန်း လွှမ်းမိုးထားသော ထူးခြားသောနေရာ… ၀ိညာဉ်လေထုတွေ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြောင်းလဲနေ ဘိသိက်ခြင်းတန်ခိုးတွေ ရရှိသောနေရာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုန်း လွှမ်းမိုးထားသော ထူးခြားသောနေရာ…🙏💖
Verse: (ကိုယ်တော့်အနားမှာ ကျွန်ုပ်နေချင်တယ် ကိုယ်တော့်ဘုန်းတော် ကျွန်ုပ်မြင်ချင်တယ် ကျွန်ုပ်အသက်ရှုသံ ကိုယ်တော့်ကြောင့်ပဲ ကိုယ်တော်မရှိတဲ့ဘဝ စက္ကန့်လေးတိုင်းအဓိပ္ပါယ်မဲ့နေတယ် ကိုယ်တော့်အနားမှာ သာ၍နီးစေပါ ကျွန်ုပ်အား) ၂ CHO: (ဘယ်အရာ နဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး ကိုယ်တော့်မေတ္တာ ကျွန်ုပ်အားရစ်ပတ်ထားတာ အနွေးထွေးဆုံး အလှပဆုံး ကိုယ်တော် ကားတိုင်ထက်မှာအသွေးတော်သွန်းကာ ကျွန်ုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းက ) ၂ .. ထာဝရအချစ်ပါ
Verse 1 ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့အတူရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်ဘဝအတွက် အလိုအပ်ဆုံးပါ ကိုယ်တော်ရှင်နဲ့အတူရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်ဘဝအတွက် အရေးကြီးဆုံးပါ Verse2ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့အတူရှိခြင်းက ကြောက်ရွှံ့စိတ်များ ဖယ်ရှားပေးတယ် ကိုယ်တော်ရှင်နဲ့အတူရှိခြင်းက ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့အောင်မြင်ခြင်းပါ Chorus : တောင်ထိပ်၌လည်းကိုယ်တော်ရှိတယ် လွင်ပြင်မှာလည်းကိုယ်တော်ရှိနေတယ် ဒုက္ခရောက်ချိန် သုခရှိနေချိန် ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူ ကိုယ်တော်ရှိတယ် Bridge : ကောင်းသောသူ မကောင်းသောသူအားလုံးအပေါ်မှာ ခွဲခြားခြင်းမရှိနေပူမိုးရွာစေတယ် အားနည်းသူ အားကြီးသူ သားသမီးများအပေါ် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ ကိုယ်တော်မေတ္တာ
Verse : နေ့ရက်တိုင်းအသစ်ခံစားရ မျက်မှောက်တော် မနေ့ကထက်တိုး၍မြင်ရ ခမ်းခြောက်မသွားပါ စီးဆင်းအမြဲသာ အဂ္ဂါပေ မေတ္တာ သခင့်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များ ချီးမွမ်းစဉ် အသစ်အသစ်သော ကျေးဇူးခံစား ချီးမွမ်းလို့မကုန် သီကျူးဖွဲ့နွဲ့မကုန် အနှိုင်းမဲ့နာမ Cho: အရင်အချိန်ထက်တိုး၍ ကိုယ်တော်အားချစ်သည် အရင်အချိန်ထက်တိုး၍ ကျန်ုပ်လိုအပ်သည် တိုး၍သိလေ တိုး၍ချစ်လေ တိုး၍လိုချင် Bridge: ကိုယ်တော်မေတ္တာ အနှိုူင်းမဲ့ပါ ထာဝရ ကိုယ်တော်အချစ်သာ ထူးမြတ်စုံလင်တာ နှလုံးသားရဲ့တောင့်တရာ ကျွန်ုပ်ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်ပါ အရာရာထက်သခင့်အချစ်သာ/ပဲ အလိုအပ်ဆုံးပါ်
Verse : (အလုံးစုံတတ်နိူင်သောဘုရား ပင်လယ်ကိုခွဲကာလွတ်မြောက်စေသူ အနန္တတန်ခိုးနှင့် ထာဝရအမြဲပြည့်စုံသူ မတတ်နိူင်သောအရာ မရှိတဲ့ဘုရား သေခြင်းကိုပင်အောင်မြင်သောသူ အနန္တတန်ခိုးနှင့် ထာဝရအမြဲစိုးစံသူ) Pre Chorus: (အရာခပ်သိမ်းတို့ရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို အုပ်စိုးသူ အရာခပ်သိမ်းတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်ရာ) Chorus: (လူတွေတောင်းပန် ကြံစည်သမျှထက် အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းငှါ တတ်စွမ်းသော သခင်ဘုရား လူတွေစဉ်းစား မျှော်လင့်သမျှထက် ကျော်လွန်ပြီးအမြဲတမ်း အလုပ်လုပ်သူ တတ်စွမ်းနိူင်တာ ကိုယ်တော်ပါ) Bridge: ( ယခု...
Verse: ၀ိညာဉ်တော် ဆင်းကြွပြီ ‌လေထုတစ်ခုလုံး ပြောင်းလဲပြီ ဆာငယ်သူကို တို့ထိ စကားပြောနေပြီ မျက်မှောက်တော်နဲ့ လွှမ်းမိုးပြီ မသိ၍နားမလည်နိုင်သော နက်နဲသောအရာများဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် ဖွင့်ပြနေပြီ Pre-Cho အနက်ရှိုင်းဆုံးသော ထင်ရှားပြသော ကိုယ်တော့်မျက်မှောက်မှာ အရာရာပြည့်စုံ ထင်ရှားပြသော အနက်ရှိုင်းဆုံးသော ကိုယ်တော့်မျက်မှောက်မှာ အရာရာပြည့်စုံ Cho – အခြေအနေတွေအားလုံး ထူးခြား ပြောင်းလဲပြီ အနာတွေအားလုံး ပျောက်ကင်းလို့ ကျန်းမာပြီ လိုချင်တာအားလုံး သိမ်းပိုက်ရရှိပြီ အရာရာတွေအားလုံး...
Verse: ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခု ကိုယ်တော်နဲ့သာ နေချင်သူ အတွင်းနှလုံးသားမှ တောင့်တဆာငတ် ရှိသမျှအရာခပ်သိမ်း ကိုယ်တော်ကိုသာ ပေးအပ် သခင့်အတွက်ဖြစ်စေ ပေးအပ်ပူဇော် … Cho: (ကျွန်ုပ်နှလုံးသား သခင်ဘုရားအား ဘ၀တစ်သက်ဆုံးတိုင် ‌ရွေးချယ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပြီ ကျွန်ုပ်နှလုံးသား ….)၂ bridge : မာန်မာနတို့ကို ရိုက်ချိုးပြီး ကျွန်ုပ်နှလုံးသားကို ပုံသွင်းပြီး ကိုယ်တော်သဘောအတိုင်းဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒ ….]
Verse 1: လက်ခုပ်တီးလျှက် ထာဝရဘုရားအား (ချီးမွမ်းလော့)၃ လက်ခုပ်တီးလျှက် လက်ခုပ်တီးလျှက် လက်ခုပ်တီးလျှက် ထာဝရဘုရားအား ချီးမွမ်းလော့ Cho: စာတန်​သည်​ရှုံး၍ ထွက်​​ပြေး စာတန်​သည်​ရှုံး၍ ထွက်​​ပြေး စာတန်​သည်​ရှုံး၍ ထွက်​​ပြေး စာတန်​သည်​ရှုံး၍ ထွက်​​ပြေး စာတန်​သည်​ရှုံး၍ ထွက်​​ပြေး စာတန်​သည်​ရှုံး၍ ထွက်​​ပြေး ကျွန်​ပ်​အာင်​မြင်​ပြီ (စာတန်​သည်​ရှုံး၍ ထွက်​​ပြေး)၃ ကျွန်​ပ်​အာင်​မြင်​ပြီ Verse 2: ကလျှက် ခုန်လျှက် ထာဝရဘုရားအား (ချီးမွမ်းလော့)၃ ကလျှက်...
Verse 1: အတောင်အောက်မှာ ဝှက်ထားမှုပါ စောင့်ထိန်းပါ တန်ခိုးကြီးလက်တော်ဝယ် Cho: ပင်လယ်လှုင်းလုံးရယ် မိုးကြိုးထန်ချိန် လေဟုန်စီး အဖ နှင့်မုန်တိုင်းများအထက် ကိုယ်တော်အုပ်စိုးရှင် လှိုင်းလုံးတွေအပေါ် ကိုယ်တော်ရှင်ကြောင့်သာ ငြိမ်ဝပ်လျက်နေသည် Verse 2: ကိုယ်တော်၌သာ ခိုနားစေပါ ခက်ခဲချိန် ကိုယ်တော်တန်ခိုး ယုံကြည်
Verse 1: ကိုယ်တော်ဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကို စဉ်းစားရင် မကုန်နိုင်ဘူး ကျွန်ုပ်ရဲ့ အသက်တာထဲ အချိန်တွေတိုင်း ကျွန်ုပ်ရဲ့အနားမှာရှိတဲ့သူ မမြင်နိုင်လည်း အနီးအနားလေးမှာဘဲ pre. ဒီလိုသခင့်အချစ်မျိုး ဘယ်နားလိုက်လို့ရှာမလဲ အငယ်ဆုံးကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မပြစ်ပယ်ခဲ့ Cho. ယုံကြည်စွာ ကိုးစားသူအတွက် ကိုယ်တော်ရှင် အသင့်ရှိနေမြဲ မရေရာအားငယ်သောသူအတွက် ကျောက်ဆောင် ယေရှု ခိုလှုံကာဆက်ကပ်သူအတွက် ကြိုဆိုလက်ကမ်းလို့နေဆဲ သေချာတဲ့အနာဂတ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့သူ ခိုလှုံရာ ယေရှု ရေး….. Verse 2:...